ဟာသ Archives - Lupyo News
January 8, 2021 by Lupyo News
အိမ်ရှင် ကျောင်းဆရာမ နှင့် ရုပ်အရမ်းချောတဲ့ အိမ်ဖော်မလေးတို့ တွေ့ကြသောအခါ…
December 20, 2020 by Lupyo News
အိမ်ရှင် ကျောင်းဆရာမ နှင့် ရုပ်အရမ်းချောတဲ့ အိမ်ဖော်မလေးတို့ တွေ့ကြသောအခါ… အိမ်ရှင် ကျောင်းဆရာမရဲ့ ယောက်ျား နှင့် ရုပ်ချောလှတဲ့ အိမ်ဖော်မ ဇာတ်လမ်း မိန်းမ ဖြစ်သူက ကျောင်းဆရာမ ဖြစ်တော့ တာဝန်ကျရာ နယ်မြေဒေသမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်။ အိမ်မှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်။ သားသမီးက မရှိ စားဖို့ သောက်ဖို့ ချက်ပြုတ်ဖို့ကပြသနာ မကြီးလှပေမယ့် အဝတ်လျှော် နဲ့ အိမ်သန့်ရှင်းရေး က ပြသနာရှိလာတော့ ယောက်ျားဖြစ်သူကအိမ်ဖော်တစ်ယောက်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး အိမ်ဖော်ခေါ်ထားလိုက်တယ်။ တာဝန်ကျရာ မြို့မှ ကျောင်းပိတ်ရက်အိမ်ကို ပြန်ရောက် လာသော အခါ သူ့ယောက်ျားကို မိန်းမဖြစ်သူ ဆရာမက ” ရှင့် အိမ်ဖော်ကလည်း ချောလှချည်လား ကိုမိုးကြီးရဲ့ ” ယောက်ျားဖြစ်သူ ကိုမိုးကြီးက ပြန်ပြောတယ် ” ချောလား … Read more
မရယ်ပဲ နေနိုင်တယ်လို့.. အာမခံရဲရင် ရှဲယူပြီး ပုံလေးကို နှိပ်ကြည့်လိုက်လေ…
November 15, 2020 by Lupyo News
မရယ်ပဲ နေနိုင်တယ်လို့.. အာမခံရဲရင် ရှဲယူပြီး ပုံလေးကို နှိပ်ကြည့်လိုက်လေ… မရယ်ဘူးဟုအာမခံမှဖတ်ပါ လူသုံးယောက် သင်္ဘောတစင်းစီးပြီး ခရီးထွက်လာကြတယ်…. သဘောင်္ ကလမ်းမှာပျက်သွားတယ်….. သူတို့သဘောင်္ပျက်သွားတဲ့နားက ကျွန်းက လူသားစားတဲ့ လူရိုင်းတွေနေတဲ့ကျွန်း……… လူရိုင်းခေါင်းဆောင်- မင်းတို့သုံးယောက်ကို သတ်ပစ်ရလိမ့်မယ်…. လူသုံးယောက်- မလုပ်ပါနဲ့…ဘာခိုင်းခိုင်းလုပ်ပေးပါ့မယ်….. အသက်တော့ ချမ်းသာပေးပါ………. လူရိုင်းခေါင်းဆောင်- ဒါဆို မင်းတို့ကိုနာရီဝက် အချိန်ပေးမယ်….. အမျိုးတူအသီး(၁၀)လုံးယူလာခဲ့ကြ၊ဒါဆိုရင်အသက်ချမ်းသာပေးမယ်…. အဲဒီ့တဆင့် အောင်မြင်သွားရင် နောက်တဆင့်ထပ်ခိုင်းမယ်…. အဲ့ဒါပါ လုပ်နိုင်ရင် မင်းတို့မြို့ကို ပြန်တဲ့လမ်းပြပေးမယ်၊ညွှန်ပေးလိုက်မယ်။ (၁၅)မိနစ်ခန့်အကြာ………… ပထမလူ- ပန်းသီး(၁၀)လုံးနဲ့ပြန်လာတယ်…. လူရိုင်းခေါင်းဆောင်-ကဲမင်းက ပထမအဆင့်တော့ အောင်သွားပြီ…. ဒုတိယအဆင့်ကို ခိုင်းမယ်၊ မင်းယူလာတဲ့အသီး(၁၀)လုံးကို တလုံးချင်းစီ ဖင်ထဲထည့်ရမယ်။ ထည့်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာမငိုရ၊မရယ်ရ မမဲ့ရ…..မအော်ရ၊အမူရာမပျက်ရဘူး…. တကယ့်လို့အမူရာ ပျက်ခဲ့ရင် မင်းကိုသတ်မယ်….. မပျက်ရင်တော့ မင်းပြန်လိုတဲ့လမ်းကိုညွန်မယ်….. ပထမလူ- ပန်းသီး(၅)လုံးမြောက်မှာ … Read more
မိန်းမက ယောက်ျားရဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတာကို ယောက်ျားဖြစ်သူက သိသွားသောအခါ …. (ရုပ်သံ)
August 12, 2020 by Lupyo News
မိန်းမက ယောက်ျားရဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတာကို ယောက်ျားဖြစ်သူက သိသွားတော့ …. (ရုပ်သံ) TIK TOK မှာအရမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါဗျာ။ ကောင်မလေးကသူ့မှာယောက်ျားလဲရှိပါရက်နဲ့ သူ့ယောက်ျားရဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းလေးက အရမ်းကိုနာမည်ကြီးပြီး အရမ်းလည်းကြည့်လို့ကောင်းနေပါတယ်နော်။ ကောင်မလေးကသူ့ယောက်ျားကို အရွဲ့တိုက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ခုလိုလုပ်တယ်ဆိုလဲ မလုပ်သင့်ပါဘူးဗျာ။ ကောင်မလေးကပဲတကယ်ဖောက်ပြန်တာလား။ ဒါမှမဟုတ်ကောင်လေးကပဲ စွတ်စွဲနေတာလား ဝေခွဲမရဖြစ်နေပါပီနော်။ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်း မှတ်ချက်လေးတွေရေးပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်။ ရုပ်သံကြည့်ရန် ============= unicode မိနျးမက ယောကျြားရဲ့ သူငယျခငျြးနဲ့ ဖောကျပွနျနတောကို ယောကျြားဖွဈသူက သိသှားတော့ …. (ရုပျသံ) TIK TOK မှာအရမျးနာမညျကွီးနတေဲ့ သုံးပှငျ့ဆိုငျအခဈြဇာတျလမျးလေးပါဗြာ။ ကောငျမလေးကသူ့မှာယောကျြားလဲရှိပါရကျနဲ့ သူ့ယောကျြားရဲ့သူငယျခငျြးနဲ့ ဖောကျပွနျနတောပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီသုံးပှငျ့ဆိုငျဇာတျလမျးလေးက အရမျးကိုနာမညျကွီးပွီး အရမျးလညျးကွညျ့လို့ကောငျးနပေါတယျနျော။ ကောငျမလေးကသူ့ယောကျြားကို အရှဲ့တိုကျခငျြတဲ့စိတျနဲ့ ခုလိုလုပျတယျဆိုလဲ မလုပျသငျ့ပါဘူးဗြာ။ ကောငျမလေးကပဲတကယျဖောကျပွနျတာလား။ ဒါမှမဟုတျကောငျလေးကပဲ … Read more
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားနားတွင် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်
August 11, 2020 by Lupyo News
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားနားတွင် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ် ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရား အနီးတွင် ဘိုးတော်​တစ်ယောက် ဗေဒင်ဟောနေတာကို ဘေးကလူငယ်အုပ်စု ၄/၅ယောက်က လှောင်သလိုလို ပြောင်သလိုလိုနဲ့ မျက်နှာပြောင်နေကြ လေသည် …။ ကြာလာတော့ဘိုးတော်လဲ ဒေါသတွေ ထွက်လာပြီး … `ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ငါကိုဘာထင်နေလဲ? ငါကျိန်စာတိုက် အင်းခွက်ရေးလိုက်ရင် …. မင်းတို့ဘဝတွေ ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ ?´´ အဲ့ဒါကို လူငယ်အုပ်စုက မကြောက်တဲ့အပြင် ခွက်ထိုးခွက်လန် ဟားတိုက်ရယ်မောပြီး လှောင်ပြောင်နေကြသေးသည် …။ ဒါပေမယ်… ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ သူတို့မျက်လုံးတွေ ဘာမှမမြင်ရတော့ပဲ တစ်လောကလုံးမှောင်မဲ သွားလေတော့သည် …။ အဲ့သည့်တော့မှသူတို့လဲ အသိတရားဝင်လာကြပြီး `အဖိုးရယ်သားတို့ မှားသွားပါတယ် ။ သားတို့ကိုခွင် လွှတ်ပေးပါ´´ လို့အော်ကြဒါပေါ့ အဲချိန်မှာ ဘိုးတော်ပြန်ပြော လိုက်တဲ့စကားက `မသာတွေငါဘာမှ မလုပ်ရသေးဘူး … Read more
“ မိန်းမက လင်ငယ် နဲ့ နောက်မီးလင်း နေတုန်း လင်ကြီးနဲ့ ပက်ပင်းတိုးသောအခါ”
July 20, 2020 by Lupyo News
“ မိန်းမက လင်ငယ် နဲ့ နောက်မီးလင်း နေတုန်း လင်ကြီးနဲ့ ပက်ပင်းတိုးသောအခါ” ဖောက်ပြန် လွန်းတဲ့ မိန်းမ မိန်းမက လင်င ယ်နဲ့ နောက်မီး လင်းနေတုန်း လင် ကီးက တံခါး ကို ဆောင့်ကန်ဝ င်လာတော့ အိပ်ခန်း ထဲမှာ လင်ငယ် နဲ့ ပက်ပင်း တိုး ပါလေရော။ လင်ကြီးက သူ့မိန်းမကို “နင်အပြင် ထွက်နေ သူနဲ့ငါနဲ့ ၂ ယော က်တည်း စာရင်းရှင်း မယ်” ဆိုပြီး အိပ်ထဲ က သေနတ် ၂ လက်ကို ထုတ်ပြီး … “ဒီသေနတ်ေ တွက ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သုံးတဲ့သေ နတ်တွေ အသံသြာ မည်ပြီး ကျည်ဆံမ … Read more
မုန့်လေးကျွေးလိုက်ရုံဖြင့် တောင်တက်ခရီးကို အသွားအပြန် ပို့ဆောင်ပေးတတ်တဲ့ ဇွဲကပင်တောင်ခြေက ကောင်ကြီး
July 7, 2020 by Lupyo News
မုန့်လေးကျွေးလိုက်ရုံဖြင့် တောင်တက်ခရီးကို အသွားအပြန် ပို့ဆောင်ပေးတတ်တဲ့ ဇွဲကပင်တောင်ခြေက ကောင်ကြီး ဇွဲကပင်တောင် (အရှေ့ပိုးကရင်: လါင့်ခွဲါက်ၜင်) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကရင်ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသော တောင်ဖြစ်သည်။ ကရင်ပြည်နယ်၏ အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၂၃၇၂ ပေမြင့်ပြီး ဘားအံမြို့၏ တောင်ဘက် ၇ မိုင်ခန့်အကွာ ခလောက်နို့ကျေးရွာအနီးတွင် တည်ရှိသည်။ ဇွဲကပင်တောင်သို့ တက်ရန်နှင့် ဆင်းရန်အတွက် နေရာ (၂) ခု ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခုမှာ ခလောက်နို့ ကျေးရွာဝင်ပေါက်ဖြစ်ပြီး ဘားအံမြို့မှ နေ၍ (၁၅) မိနစ်ခန့် ဆိုင်ကယ် (သို့) ကားဖြင့် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ နောက်တစ်ခုမှာ လုံမဏ္ဏီဥယျာဉ်ဝသင်ပေါက်ဖြစ်ပြီး သံလွင်တံတားနှင့် နီးသောကြောင့် ခရီးသွားများ အများဆုံးတက်ရောက်သော ဝင်ပေါက်ဖြစ်သည်။ ဇွဲကပင်တောင်တက် ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို လိုက်ပို့ပေးတတ်တဲ့ ကောင်လေးတွေ တောင်ခြေမှာ … Read more
“သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဗမာ “ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြီးက အင်ကြီး အတုကြီးဆိုတဲ့… ဝှေ့ခါရေမဆေးတစ်ဦးရေးတဲ့စာ…
July 6, 2020 by Lupyo News
“သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဗမာ “ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြီးက အင်ကြီး အတုကြီးဆိုတဲ့… ဝှေ့ခါရေမဆေးတစ်ဦးရေးတဲ့စာ… ကျုပ်ကိုယ်တိုင် ‌ဝှေ့ခါရေမဆေး စိန်တူတလက်ဖြစ်လို့ ဒီစာကိုရေးပါတယ် ဝှေ့ခါရေမဆေး စိန်တူတွေရဲ့ အကြောင်း (၁) ဪ …….ပြောကြပါဗျာ ပြောကြပါ… ကျနော်တို့က တရားမဝင် သယံဇာတ သူခိုးတွေလို့ ကျနော်တို့ကိုမှ မယိုးရင် …. ခင်ဗျားတို့မှာက လက်ညှိုးထိုးစရာမှမရှိတာ လက်ညှိုးထိုးရဲတဲ့ သတ္တိတွေမှ မရှိတာ။ တိုင်းပြည်နိုင်ငံ ဥပဒေ အနေနဲ့ ကျနော်တို့ကို တရားမဝင် ကျောက်စိမ်းခိုးတူးသူတွေလို့ ကြည့်မြင်သလိုမျိုး…. မြေစာပုံ‌ပေါ်က မြေသည်ကားတွေကို သတ္တိရှိရှိကြည့်ကြပါ… အခွန်မဲ့ တရားမဝင် စက်ယန္တရားကြီးတွေကို သတ္တိရှိရှိကြည့်ကြပါ…. ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီရဲ့ တစ်နှစ်တာ တူးဖော်ရရှိတဲ့ ကျောက်မြက်များစွာကို သတ္တိရှိရှိတိုင်းတာကြပါ…. ဘယ်လိုစည်းစနစ်တွေနဲ့ တူးဖော်ယူကြသလဲဆိုတာကိုလည်း သတ္တိရှိရှိနဲ့ ကြည့်ကြပါ…. နိုင်ငံတော်ကြီး တရားဝင်အကျိုးတူညီ … Read more
Ecee2 ကို တစ်ယောက်တစ်လုံးသောက်လိုက်မိတဲ့ ၁၅နှစ်ကောင်လေး အသက်၂၀​ကောင်မလေးတို့ရဲ့ အဖြစ်
June 27, 2020 by Lupyo News
Ecee2 ကို တစ်ယောက်တစ်လုံးသောက်လိုက်မိတဲ့ ၁၅နှစ်ကောင်လေး အသက်၂၀​ကောင်မလေးတို့ရဲ့ အဖြစ် ကောင်လေးက (၁၅)နှစ် ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ကလေးရုပ် သူ့ဘေးမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါတယ် အသက်(၂၀) ကျော် …ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးက ချစ်သူတွေတဲ့ မနေ့ က မူးပြီး အတူတူ နေလိုက်မိတယ်တဲ့…လက်တွေသွက်ချက်.. အဲ့တာ မနက်မိုးလင်းချင်းချင်း တဲ့ သူတို့ကြားဖူးတဲ့ ECee2 အရေးပေါ်တားဆေး ဝယ်သောက်လိုက်တယ်တဲ့..အဲ့တာအခုအရမ်း မူးပြီး နေရခက်နေလို့တဲ့ ဆိုပြီး ဆေးခန်းလာပြကြတာ.. ဘာပဲ ဖြစ် ဖြစ် နို့နံ့စင်တာမစင်တာ ခနထား အမှန် အတိုင်းပြောပြ တာတင် ကျေးဇူးတင်မိနေပြီ..ကိုယ်က ကဲ ညီမလေး ခုတင်ပေါ်တက် ဆိုတော့မှ..မဟုတ်ဆရာ နေရခက်‌ပြီး မူးနေတာ သား ပါ ဆိုပြီ ဟိုကောင်လေး ကပြောတယ်. ဟမ် ဘယ်လို … Read more
စိတျထဲကွကှေဲစရာ နာရေးသတငျးလေးပါ . . .
June 3, 2020 by Lupyo News
စိတျထဲကွကှေဲစရာ နာရေးသတငျးလေးပါ . . . စိတျထဲကွကှေဲစရာ နာရေးသတငျးလေးပါ ။ စညျးကမျးမဲ့မောငျးတိုကျပွီးပွေးတဲ့လူ့ငနှားရမေငျး သကျရှညျကနျြးမာပါစေ ။ သုံးဦးသဆေုံးသညျ့ YBS (၄၀)ယာဉျတိုကျမှုမှ ယာဉျမောငျးက ယာဉျမောငျးအဖွဈ မှတျပုံတငျထားခွငျး မရှိ ယမနျနကေ့ လူ ၃ ဦးသဆေုံးခဲ့သညျ့ YBS (၄၀)ယာဉျတိုကျမှုဖွဈပှားခဲ့ရာ ယငျးYBS (၄၀)၏ ယာဉျမောငျးသညျ YRTA တှငျ ယာဉျမောငျးအဖွဈ မှတျပုံတငျထားခွငျးမရှိဘဲ ယာဉျပိုငျရှငျက တကျရောကျမောငျးနှငျ ခိုငျးခွငျးဖွဈကွောငျး ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အမြားပွညျသူသယျယူပို့ဆောငျရေးကွီးကွပျမှူအာဏာပိုငျအဖှဲ့(YRTA )မှ ယနေ့ ဇှနျလ ၃ ရကျတှငျ သိရသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဥပဒကွေောငျးအရသာမက YRTA စညျးမဉျြးအတိုငျး ထိရောကျစှာအရေးယူသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ဇှနျ ၂ရကျ နံနကျ ၆နာရီခနျ့က ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ၊ အနောကျပိုငျးခရိုငျ၊ ကမာရှတျမွို့နယျ … Read more